Help:ရွေးချယ်စရာများ - MediaWiki
Toggle အသုံးပြုသူ ပရိုဖိုင် subsection
Toggle ပုံပန်းသွင်ပြင် subsection
Toggle တည်းဖြတ်ခြင်း subsection
Toggle လတ်​တ​လော အ​ပြောင်း​အ​လဲ​များ subsection
Toggle စောင့်ကြည့်စာရင်း subsection
Toggle ရှာဖွေရန် subsection
This page isatranslated version of the page Help:Preferences and the translation is 18% complete.
မှတ်ချက်: ဤစာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မှုပြုလုပ်သည်နှင့် သင်၏ပံ့ပိုးကူညီမှုကို CC0 အောက်တွင်ဖြန့်ချိရန် သဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အများသုံးဒိုမိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အကူအညီ စာမျက်နှာများတွင် ကြည့်ရှုပါ
အကူအညီ– ဒီမှာ ဘာ လင့် ချိတ်ဆက်ထားလဲ
သစ်လွင်သော အချက်အလက်သည် Meta: m:Help:Preferences တွင်ရနိုင်သည်။ If you have checked or updated this page and found the content to be suitable, please remove this notice.
အသုံးပြုသူအမည် - Your user name. Only trusted users can change your username, and the wiki must also have the Renameuser extension installed.
အုပ်စုများ၏ အဖွဲ့ဝင် - A list of the user groups you are in.
ဆက်သွယ်ထားသော အက်ပ်များ - On Wikimedia wikis, this link allows you to manage external applications that are permitted to access your account. နောက်ထပ်အချက်အလက်အတွက် OAuth help ကိုကြည့်ပါ။
တည်းဖြတ်မှုအရေအတွက် - How many edits you have made. Not all wikis will have this.
မှတ်ပုံတင်သည့် အချိန် - The time your account was registered.
စကားဝှက် ပြောင်းရန် အောက်တွင်ကြည့်ပါ
ဂလိုဘယ် အကောင့်: အောက်တွင်ကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်ထံသို့ အခြားအသုံးပြုသူများ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းကို ခွင့်ပြုရန် This allows other registered users to send you an email using "ဤအသုံးပြုသူအား အီးမေးပို့ပါ" link on the sidebar of your user page. Emails are sent usingaweb interface, and your email address is not revealed toasender until you reply by email.
အသစ်စက်စက် အသုံးပြုသူများဆီမှ အီးမေးလ်လက်ခံရန် ခွင့်ပြုမည် This allows users without the autoconfirmed permissions to send you emails.
ကျွန်ုပ် အခြားအသုံးပြုသူများထံပို့သော အီးမေးမိတ္တူကို ကျွန်ုပ်ထံ ပြန်ပို့ရန်
ကျွန်ုပ်၏စောင့်ကြည့်စာရင်းမှ စာမျက်နှာတစ်ခု သို့မဟုတ် ဖိုင်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါက ကျွန်ုပ်ဆီ အီးမေးပို့ရန်
Here you can choose the skin you want to use. You can preview the available skins before choosing them, by clicking on the "နမူနာ" link next to each skin. Please refer to Help:Skins for more details.
ကွဲပြားမှုများအောက်ရှိ စာမျက်နှာတွင်ပါဝင်သည်များကို မပြပါနှင့်
နောက်ပြန်ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပြီးပါက ကွဲပြားမှုကိုမပြပါနှင့်။
လင့်ကို မျဉ်းသားသည့် ပုံစံ:
ဝှက်ထားသော ကဏ္ဍများကို ပြရန်
နောက်ပြန် ပြန်သွားရန်လင့်ခ်ကို နှိပ်သောအခါ အတည်ပြုချက်တောင်းခံပုံအား ပြသရန်
SVG with PNG fallback (MathML can be enabled via browser plugin)
အပိုင်းလိုက်ခေါင်းစဉ်များကို ညာကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အပိုင်းလိုက် တည်းဖြတ်ခြင်းကို အသုံးပြုရန်
ကလစ်နှစ်ခါနှိပ်ပြီး စာမျက်နှာများအား ပြင်ဆင်ရန်
ဖောင့်စတိုင်ကို ပြုပြင်ရန် -
တည်းဖြတ်မှုအားလုံးသည် အရေးမကြီးသော တည်းဖြတ်မှုဟု ပုံသေသတ်မှတ်ရန်
တည်းဖြတ်အတိုချုပ် ဗလာဖြစ်နေလျှင် သတိပေးရန် (သို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ကို ပြန်ပြင်ရန်)
မသိမ်းရသေးသော ပြောင်းလဲမှုများ နှင့် တည်းဖြတ်ဆဲစာမျက်နှာမှ ထွက်သွားလျှင် သတိပေးပါ
ပထမတည်းဖြတ်မှုတွင် နမူနာကို ပြရန်
တည်းဖြတ်သည့်အကွက်မတိုင်မီ နမူနာကို ပြရန်
စာမျက်နှာကို ပြန်လည် မခေါ်ယူဘဲ နမူနာများ ပြသရန်
အရေးမကြီးသော တည်းဖြတ်မှုများကို လတ်တလော အပြောင်းအလဲများမှ ဝှက်ရန် - This enables you to hide edits marked as minor (see Help:Editing pages ). Since some users will rapidly makealot of tiny tweaks to update templates or fix spelling errors you may find enabling this to be useful. You can also turn this on temporarily from the recent changes page (see Help:Tracking changes ).
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Help:Preferences/my&oldid=5293250"